Hlola i-Vatican - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eVatican
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weVatican
Bukela ividiyo ekhuluma ngeVatican
Hlola i-Vatican engadingi isingeniso. Njengesikhungo seSonto lamaRoma Katolika, umbuso weVictoria City - kanye nezifunda zase-Borgo, Prati kanye nezindawo ezungeze iMonte Mario - ugcwele umlando nobuciko kunamadolobha amaningi emhlabeni.
IVictoria City iyizwe elizimele, isihlalo sesikhashana sikaPapa, inhloko yeSonto LamaKatolika lomhlaba wonke; zizungezwe ngokuphelele idolobha lase Rome, e-Italy, iVatican nayo iyindawo encane kunazo zonke emhlabeni. Ngaphandle kweVictoria City ngokwayo, izakhiwo eziyishumi nantathu eRoma kanye neyodwa eCastel Gandolfo (indawo yokuhlala yasehlobo likaPapa) nazo zijabulela amalungelo angaphandle.
Imigwaqo emikhulu esigcemeni ibizwa nangokuthi yi-borghi (hhayi eyayi-dude njengakwamanye amadolobha); Ngokuvamile, lapho uthola iSt Peter, izivakashi ezingaphansi ziba lula. Vele, uhlale ukhumbula ukuthi kaningi akunakwenzeka ukubalekela ngokuphelele ukucwaswa kwesikhungo sedolobha.
I-Prati ingamashumi amabili nambili, futhi eyokugcina, i-rione yomuzi. Isifunda esihle sibekwe ngasekupheleni kwekhulu le-19th, senzelwe ukwakhiwa (kanye nomakhelwane we-Esquilino nendawo ezungeze piazza della Repubblica) izisebenzi zikahulumeni woMbuso omusha osanda kumiswa Italy. Ngokungafani ne-Esquilino - ebigcwele abacebile kakhulu phakathi kwabasebenzi boMbuso - lesi sifunda sasiyikhaya lamaphasishi akhuphukayo alo muzi, futhi lokho kwabonisa e1912 lapho iPati yayingumakhelwane wokuqala edolobheni ukuhlinzekwa ngogesi. Izikwele zayo ezibaluleke kakhulu i-piazza Cavour esanda kulungiswa ne-piazza del Risorgimento (eduzane neMinyuziyamu yeVietnam) ngenkathi indawo enkulu eyakhiwe nge-Cola di Rienzo, nayo ingenye yemigwaqo yaseRoma edume kakhulu.
Umakhelwane wakhiwa ngesikhathi sezingxabano phakathi kwePapa kanye nesifundazwe sase-Italy ngakho-ke, abahleli bamadolobha baklama ukwakheka kwayo komgwaqo ngendlela yokuthi kungenzeki kunoma ngubani ukubona idolobha laseSt. Peter lisuka emigwaqweni yalo ebanzi nehlelwe ngokucophelela. Amabutho wesifunda, phakathi kokunye, isonto lamaWaldensia (kwi-piazza Cavour).
Ngamamitha ayo we-139, iMonte Mario iyisilinganiso esiphakeme kunazo zonke eRoma; noma kunjalo, akuyona ingxenye yamagquma ayisikhombisa angokomlando. Ukusuka engqungqutheleni yayo, eyaziwa ngokuthi i-Zodiaco (okusho ukuthi "zodiac"), ungaba nombono omuhle wedolobha. Phakathi nonyawo lwegquma neVatican City, kunezifunda ezimbili - iTrionfale neDella Vittoria; zombili zamuva nje (ama-1900s / ama-1960s akuqala) futhi zinikeza ezinye izindlela zokuhlala ezingabizi kakhulu kunePati.
Umsuka we-Papal States, okuye ngokuhlukahluka kweminyaka edlule ngokweqile, ungalandelelwa ubuyela emuva ku-AD 756 nge-Donation of Pepin. Kodwa-ke, oPapa babeyizikhulu zokubusa zaseRoma kanye nesifundazwe esisondelene selokhu kwawa uMbuso WaseRoma kanye nokubuyiselwa kwamandla okulandelayo kwe-Byzantine e-Italy; opapa, ngokweqhaza labo lokuziphilisa, babusa izingxenye zengxenye ephakathi nenhlonhlo yase-Italy iminyaka engaphezu kwenkulungwane kuze kube yi-1860, lapho iningi lamaPapa oMhlaba lathathwa uMbuso osanda kwakhiwa Italy. NgoSeptemba 20, 1870, amaPapal States ayeka ukuba khona lapho iRoma ngokwayo imenyezelwe.
Izinkinga ezikhona njengamanje ze-Holy See zifaka phakathi inkhulumomphendvulwano exhumanisanayo nokubuyisana, kanye nokusetshenziswa kwemfundiso yeSonto ngesikhathi soshintsho olusheshayo kanye nokwenziwa kwembulunga yonke. Cishe abantu abayizigidi eziyinkulungwane emhlabeni wonke bathi banokholo lwamaKatolika.
Kukholelwa kakhulu ukuthi iDolobha laseVatican ne-Holy See ziyafana, kanti empeleni akunjalo. I-Holy See iqala emuva kubuKristu bokuqala futhi ingumbono oyinhloko wabasekeli abangaphezu kwezigidi eziyinkulungwane baseLatin kanye nabase-Eastern Cape emhlabeni jikelele. Ama-Ordinances aseVictoria City anyatheliswa ngesiNtaliyane; Imibhalo esemthethweni ye-Holy See ikhishwa kakhulu ngesiLatini. Lezi zinhlaka zombili zinamaphasiphothi ahlukile: i-Holy See, hhayi izwe, ikhipha amaphasipothi kuphela kodwa iVictoria City State ikhipha amaphasiphothi ajwayelekile.
IVatican ihlala egqumeni eliphansi phakathi kwe-19 m ne-75 m ngaphezu kwezinga lolwandle. Ngomngcele kuphela we-3.2 km nxazonke, indawo ebiyelwe yincane kunamanye amitolo okuthenga; kodwa-ke, izakhiwo zinomlando ngokwedlulele futhi ziyaheha ngokwakha. Qaphela ukuthi, uma ukhuluma ngesimo sezwe, iningi laso liyingxenye yeVictoria Gardens.
Noma cishe abantu be-1,000 behlala ngaphakathi kweVictoria City, izikhulu eziningi, abapristi, izindelakazi, onogada kanye nabasebenzi be-3,000 bahlala ngaphandle kweVatican. Ngokusemthethweni, kukhona cishe izakhamizi ze800 ezizenza kube yisizwe esincane kunazo zonke ngosayizi wabantu emhlabeni. IVatican ifaka insimu yeqembu lebhola lezinyawo elakhiwa amaSwitzerland Guard abaphethe izakhamizi ezimbili.
Yize kungeyona ingxenye yelungu le-European Union noma i-European Economic Area, iVatican igcina umngcele ovulekile ne-Italy futhi iphathwa njengengxenye yeSpechen Area.
Izivakashi nezivakashi azivunyelwe ukushayela ngaphakathi kweVatican ngaphandle kwemvume ethile, evame ukunikezwa kuphela kulabo abanamabhizinisi nehhovisi elithile eVatican.
Inamahektare we-109 kuphela (amahektha we-44) ngaphakathi kwezindonga zawo, iVatican ihamba kalula ngezinyawo; kodwa-ke, iningi lale ndawo alitholakali kubavakashi. Izindawo ezaziwa kakhulu ezivulekele izivakashi yiSt. Basilica kanye neMnyuziyamu waseVictoria.
Uma uphokophele phezulu uMonte Mario, gqoka izicathulo ezintofontofo - kungukukhuphuka impela!
Abathandi besiLatini bajabule! I-Holy See ibamba isiLatini njengolimi lwayo olusemthethweni, futhi isihambi esikwaziyo siyamenywa ukuba sihlole le ndaba ongayithola ngaphakathi kwedolobha usebenzisa kuphela ulimi “olufile”. I-Italian, nokho, ilulimi olusemthethweni lweVictoria City futhi ihlala ilusizo kulawa amabili.
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi lapha, njengoba kunjalo nangezilimi ezinkulu zomhlaba; leli yiVatican, idolobha lamaKhatholika omhlaba kanye nabo bonke abafisa ukubona iSt Peter's Basilica.
Unogada WaseSwitzerland unikezwe umsebenzi wokuvikela uPontiff ngokwakhe. Bagqoka izembatho ezimibalabala, ezifana nomfaniswano ogqokwa amasotsha esikhathi seRenaissance; iphalethi lasebusika lezingubo lihlukile kwiphalethi lasehlobo. Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo, uMichelangelo akazange aqoke umfaniswano wamaGuards - kunalokho, badalwa ngomunye wabaphathi be-Guard, uJues Repond, ngekhulu le-19th. I-Pontifical Swiss Guard futhi ibutho elincane futhi elidala kunawo wonke emhlabeni, elasungulwa e-1506 yi "Mpi" uPapa Julius Julius II (lowo uPapa ofanayo owaqala ukwakhiwa kwalesi sisekelo 'esisha' nokwenza uMichelangelo apende iSistine Chapel ). Imvelaphi yabaqaphi baseSwitzerland, noma kunjalo, iya ngaphezulu kakhulu; oPapa, kanye neningi lababusi baseYurophu, basebenza njalo ama-mercenaries aseSwitzerland kusukela ngekhulu le-15th. Ama-mercensaries aseSwitzerland ayeyinto enkulu "yokuthumela" eSwitzerland (ngaphambi kokuthi banqume ku-1515 ukuthi bangabe besabandakanyeka ezingxabanweni zamasosha) futhi baphenduka ilusizo ikakhulukazi ngesikhathi Sack of Rome of 1527.
Isikhungo sezwe lama Katolika, le Basilica enhle kakhulu ene dome yayo (eklanywe nguMichelangelo) inengaphakathi lesabekayo. Le ndawo yinhle, kepha konke kusesimweni sokuthi isilinganiso sikuphunyuke. Ukukunikeza ukuqhathanisa, ungafanelana neSifanekiso seLibhulu, isifanekiso nesisekelo (ukuphakama kusuka emhlabathini oyisisekelo kufakwa ithoshi: i-93m), ngaphansi kwedome (ukuphakama okungaphakathi kwe-120m kusuka phansi kuya phezulu kwe-dome) negumbi lokuphumula.
Ukungena ngaphakathi, uzoqala ngokuhamba ngomtshina wensimbi (ngemuva kwakho konke, lesi yisakhiwo esibalulekile). Ungakhungathekiswa uma kukhona umugqa omude phambi kwabatholi; yonke into ihamba ngokushesha. Umugqa uvame ukufushane ekuseni futhi phakathi nesonto.
Ngaphandle kokungena ngaphakathi, ungathatha i-lifti uphuphule ophahleni bese wenza ukukhuphuka izitebhisi ezinde ze-323 phezulu esiqongweni dome ngombono omuhle. Ngesikhathi sokukhuphuka nangaphambi kokufinyelela phezulu, uzithola umi ngaphakathi kwe-dome, ubheke phansi kwi-basilica uqobo. Xwayiswa ukuthi ziningi izitebhisi ngakho-ke akusiyona eyehlulekile enhliziyweni (ngokoqobo noma ngokomfanekiso) noma i-claustrophobic njengoba isigaba sokugcina sokwenyuka singena ngesitebhisi esilingana nobubanzi bezipikili. Esikhundleni sokushiya ngaphandle iminyango ongene kuyo, yehla ungene esigcawini ukuze ubone ithuna likaPapa John Paul II, i-crypt ishiya ingaphambili.
Qaphela: kusebenza ikhodi eqinile yokugqoka (njengakwezinye izindawo eziningi zokukhulekelwa), ngakho-ke kufanele amahlombe akho ambozwe, afake ibhulukwe noma ingubo engemfushane kakhulu, futhi amadoda kufanele akhumule izigqoko zakho (okuyisiko emasontweni I-Europe. Ungahle ucelwe ukuthi uhlole izikhwama ekungeneni. Izithombe zivunyelwe ukufakwa ngaphakathi, kepha hhayi ngombala. Ukuntuleka kokukhanya kungadala ukuthi izithombe zakho zingaveli kahle, ngakho-ke kungenzeka ufune ukuthenga amakhadi okuposa ambalwa okufanele uwagcine njengezikhumbuzo.
I-basilica ivulekile i-Apr-Sep 07: 00-19: 00 nsuku zonke ne-Oct-Mar 07: 00-18: 00; kuvaliwe Ukusa kwezilaleli zabapapa.
Imisipha yansuku zonke i-M-Sa 08: 30, 10: 00, 11: 00, 12: 00, and 17: 00, and Su and amaholide e-08: 30, 10: 30, 11: 30: 12 , I-10: 13, ne-00: 16.
Ukuvakasha kwemizuzu yamahhala kwe-90 kushiya nsuku zonke kusuka kuLwazi Lwezokuvakasha e-2: 15PM, izinsuku eziningi ku-3PM.
Ukuvakasha kuyindlela kuphela yokubona iZingadi zaseVietnam, iTu, Th, ne-Sa e-10: 00, kusuka edeskini labakhokhelwa bese uqeda esigcawini saseSt. Ukuvakashela i-Necropolis kanye ne-Saint's Tomb, shayela ihhovisi lokumbiwa okungenani isonto ngaphambi kokuhambela ihora le-2, ihhovisi elivuliwe M-Sa 09: 00-17: 00.
Uma ufuna ukubona uPapa, ungabona isibusiso esijwayelekile esivela efulethini lakhe ntambama ngeSonto, vele ubonise (noma kunjalo, ehlobo awunika lona esuka endaweni yakhe yokuhlala ehlobo eCastel Gandolfo, 40 km / 25 mi from Rome) noma ungaya ukubukeka okuhlelekile kangoLwesithathu. Upapa ufika esigcawini e-10: 30 ezobusisa izixuku ezivela kuvulandi noma ipulatifomu, ngaphandle kobusika, lapho ekhuluma ehholo le-Aula Paolo VI eduze kwesikwele. Ungabuka kalula usuka kude noma uthole ithikithi lamahhala, okufanele ulithole ngoLwesibili olwedlule. Kunezindlela eziningi:
I-hotelier yakho ingakwazi ukukubhukhela
Ungalinda emugqeni omude eSt Peter ngoLwesibili lapho amaSwitzerland Guards anikezela khona amathikithi okuthumela ngakwesokunene se-basilica, ngemuva kwe12: 00 ngoLwesibili
Qaphela ukuthi uPapa kungenzeka kwesinye isikhathi ahambele umbuso.
Isikwele iSt Peter empeleni, i-ellipse. Kunamatje amabili (elilodwa ohlangothini ngalunye lwesikwele) phakathi kwe-obelisk nemithombo. Uma ungena kulawa matshe, amakholomu amane kumakholomu ahlangana kwelinye.
Imithombo yakhelwe ngabakhi bezakhiwo ezimbili ezihlukene, uCarlo Maderno noGian Lorenzo Bernini.
I-obelisk maphakathi nesikwele yathuthwa isuka Egypt eya eRoma ngo-37 AD nguMbusi uCaligula ukumaka umgogodla wesekethe wagcina uqediwe nguNero. I-Circus of Nero ebizwa ngokuthi yi-Circus of Nero yayilingana futhi ngaseningizimu yomsuka osempumalanga nentshonalanga we-basilica yamanje. Kungalesi sizungu lapho uSt Peter abethelwa esiphambanweni okokuqala ngokushushiswa kwamaKristu okwenziwa nguNero ekuqaleni kwe-64 AD futhi kuqhubeka kuze kube sekufeni kwakhe e-67 AD Indawo yokuqala ye-obelisk imakwe ngethala elakhiwe eduze kwe-sacristy ohlangothini oluseningizimu ye-basilica, lapho yahlala khona yaze yathuthelwa ku-1586 AD nguPapa Sixtus V endaweni yayo yamanje.
Iminyuziyamu yeVatican. I-M-Sa 09: 00-18: 00 (amathikithi okugcina e-16: 00). Kuvaliwe uSu ngaphandle kukaSu wokugcina we-mo; lapho kukhululekile, kugcwele, futhi kuvulekile i-09: 00-14: 00. Imnyuziyamu ivaliwe ngamaholide ku-: 1 1 & 6 Jan, 11 Feb, 19 Mar, 4 & 5 Apr, 1 May, 29 Jun, 14 & 15 Aug, 1 Nov, and 8, 25 & 26 Dec. One of imidwebo yobuciko ebabazekayo kunabo bonke emhlabeni, imnyuziyamu idume kakhulu ngezitebhisi zakhona ezithandekayo, amagumbi amaRaphael namaSistine Chapel ahlotshiswe ngendlela exakile ngeSresine Chapel ngamafrescoes kaMichelangelo. Kuhlelwe ngendlela yokuthi isivakashi silandele indlela eyodwa; uyibone! Ungakubeki phansi lokho, ngoba kuvala ngaphambi kokugcina konke komnyuziyamu!
Eminyuziyamu, imvamisa, igcwele kakhulu eSa, M, eSu lokugcina enyangeni, izinsuku zemvula, nezinsuku ezedlule noma ngemuva kweholide. Ikhodi yokugqoka: awekho amafushane noma amahlombe angenalutho. Ngokuvamile kunemugqa omude ukusuka ekungeneni owelulela ibhulokhi ekuseni kakhulu. Izivakashi ezingaholwa kufanele zijoyine ulayini ongakwesobunxele njengoba ubheke emnyango; Ulayini ngakwesokudla wenzelwe izivakashi zeqembu eziqondisiwe. Hlala ubheka ukuthi ngabe ukhona yini ngempela umugqa ngaphambi kokuthola umhlahlandlela emgwaqweni ukuze awuqeqe, izinkombandlela eziningi zizokutshela ukuthi kukhona umugqa omkhulu ngaphambili noma kungekho owufushane. Ukuvakasha kwamaNgisi amahora amabili kushiya e-10: 30, 12: 00, 14: 00 ehlobo, 10: 30 and 11: 15 ebusika. Ukubhukha, bhuka online.
Ngokubhuka weqa umugqa bese ungena ngokuphuma, eduze nokungena, ukuya edeskini eliholwa izinkambo. Kukhona nemihlahlandlela yokulalelwayo etholakalayo kusuka phezulu kwe-escalator / ramp.
Ukufinyelela i-Sistine Chapel kudinga ukuhamba ngamahholo amaningi kanye nezakhiwo eziningi (kufaka phakathi amakamelo weRaphael) futhi kuthatha cishe ihora, kepha uma uvunyelwe ukuhlala esihlalweni sabakhubazekile noma ohamba nge-pram yengane noma nge-stroller ungasebenzisa ukuphakamisa kanye iya ngqo kuSistine Chapel. Kuthatha imizuzu ye-5-10 ngaphandle kokuthi ume emgodini omude. Qaphela ukuthi yize iMnyuziyamu inkulu impela, alikho imephu yamahhala etholakala (ipheshana elilula kuphela elinokuhleleka kwamakamelo) - kufanele ulethe owakho, noma uthenge incwadi yomhlahlandlela esitolo.
Futhi, qaphela ukuthi akuvunyelwe ukuthatha izithombe noma ukukhuluma kakhulu ku-Sistine Chapel (yize wonke umuntu ephula le mithetho ngenkani). Ngenkathi umuntu angavumelana nale nqubomgomo noma cha, ukuvakasha kuzoba mnandi kakhulu ngaphandle kokuthi onogada bamemezele ukuthi “Shh!” Noma: “Akukho-foto e no video!” Njalo ngemizuzu emibili. Iqiniso ukuthi: hlonipha imithetho futhi uvumele wonke umuntu ovakashile ukuthi ajabulele okungcono kakhulu kwesipiliyoni, noma ngabe akekho omunye owenza. Uma uzama ukweba isithombe (futhi, njengawo wonke umuntu), uzothola isithombe esibi nonogada abakhalayo njengomvuzo wakho. Ungahle ukhishwe futhi uphoqelelwe ukuthi ususe izithombe uma uzithatha ngesibindi.
UCastel Sant'Angelo. I-09: 00-19.00, ukungena kokugcina e-18: 30, kuvaliwe uNksz. Mhlawumbe isakhiwo esijabulisayo kunazo zonke eRoma. Umnyombo wesakhiwo waqala impilo njenge-mausoleum ye-Emperor Hadrian, eyakhiwa phakathi kwe-135 ne-139 AD. Izinqaba ezalandela zakhiwa ngaphezulu kwe-mausoleum ngeNkathi Ephakathi futhi zangenelwa ezindlini zokuhlala nasezigodlweni ngabaPapa. Lesi sakhiwo besisetshenziswa njengejele kuze kube i1870, kepha manje sigcina isigcinimyuziyamu. Ama-opera buffs azothokozelwa ukuvakashela kuvulandi lapho uTosca eqa khona aze afe; ama-movie buffs azobona njengokuhlelwa okuvela kuma-Angelo namaDemoni.
I-Palazzo di Giustizia (Isigodlo Sobulungiswa), piazza Cavour (“amabhasi). Idizayinelwe ngumakhi wezakhiwo uGuglielmo Calderini futhi yakhelwe ukusuka e-1889 kuya e-1911 ukuze kugcotshwe iCorte di Cassazione (okulingana neNkantolo eNkulu yase-Italiya), lesi sigodlo esibonisa ukuthi i-neo-Renaissance yaqala ukubuyiselwa kakhulu e-1970, lapho izisekelo zayo zacishe zangena phakathi kwe-alluvial terrain . Okunye ukubuyiselwa okuyingxenye okulandelwe ku-1984. I-piazza Cavour ehlobene nayo yabekwa umakhi wezakhiwo uNicodemo Severi e-1885, futhi isithombe esibunjiwe nguStefano Galletti egubha uCount Camillo Benso di Cavour (indawo yokulala engemuva koBumbano lweNtaliyane) isenkabeni yezingadi. Isikwele uqobo sakhiwe kabusha ngemuva kokwakhiwa kwendawo yokupaka ngaphansi komhlaba.
Ukungenela okubili okuya eVictoria City kwabavakashi
Iminyuziyamu yeVictoria, etholakala ngeVaticano ngasenyakatho yesifundazwe sedolobha. Iminyuziyamu yeVietnam ivalwa ngamaSonto ngaphandle kweSonto lokugcina lenyanga ngayinye lapho ivulwa kusuka ku-09: 00-12: 30. Izivakashi zingahlala ngaphakathi kuze kube i-14: 00. futhi
B) I-basilica yaseSt. Peter, ohlangothini oluseningizimu-mpumalanga yedolobha futhi itholakala nge-della Conciliazione. I-basilica ivulwa kaningi kusuka ku-07: 00-19: 00. Iminyuziyamu yeVietnam ivulekele umphakathi uM-Sa 09: 00-16: 00. Izivakashi zingahlala ngaphakathi kuze kube yi-18: I-00Tuka uqaphele ukuthi lolu suku luvame ukuba matasa kakhulu ngakho-ke kungcono ukuvakashela olunye usuku uma ukwazi ukukhokha.
Ngenkathi amabhuku wesikhokelo enza konke okusemandleni ukuhlinzeka ngosizo lokubuka amaqoqo ngaphakathi eVietnam, ukuvakasha okuqondisiwe kuyindlela engcono kakhulu yokuqiniseka ukuthi uthola okuningi ngokuvakasha kwakho.
Uma uthwebula izithombe, isikwele iSt Peter mhlawumbe siyindawo ecasulayo kakhulu ngoba ihlala igcwele abantu, izithiyo, ezokuphepha nezikhulumi nezibani zilenga ezindaweni. Ngisho nangezinsuku phakathi nesonto uma lina kuphela, indawo le igcwele kakhulu. Ungabi namathemba aphezulu wokuthola isithombe esihle semvelo eVatican.
Ukuvakasha okuqondisiwe kunikezwa yiVatican uqobo. Uhambo lungabhukwa, izinsuku ze-60 ngaphambi kosuku lokuvakasha oluceliwe. Ukuvakasha okuqondisiwe kunikelwa nezinye izinkampani eziningana.
IVatican inomnotho oyingqayizivele, ongeyona yezentengiso osekelwa ngokwezezimali ngeminikelo (eyaziwa ngePeter Pence) evela kumaRoma Katolika emhlabeni wonke. Iphinde ithengise izitembu zokuposa, ama-mementos abavakashi nezincwadi. Imali ekhokhelwa ukwazisa iminyuziyamu nayo ingena kumabhokisi esonto.
IVictoria City State ine-euro (kuphela) lwemali yayo yodwa.
I-Vatican euro iyivelakancane kakhulu ekusakazweni kwamazwe aseYurophu, ngakho-ke ungayisebenzisi! Ibaluleke kakhulu kunenani lobuso bayo. IVatican futhi ukuphela kwezwe emhlabeni lapho imiyalo ye-ATM itholakala ngesiLatin.
Iminyuziyamu yaseVietnam inendawo yokudlela enobungcweti yokudlela yokudlela, ibha ne-pizzeria - konke okuvulekile ngezikhathi zokuvula imnyuziyamu kuze kube cishe ihora elilodwa ngemuva kokuvalwa. Ngaphezu kwalokho, i-Vatican Apostolic Library kanye neVictoria Archives Archives, evulekele abacwaningi bamukeli kuphela, babelana igceke elikwazi ukungena kubha yesitayela sase-Italy ngentengo ye-cafe nokukhethwa okulinganiselwe kweziphuzo zotshwala. Bona futhi Rome.
Ikhofi (caffè) ekuseni, amaminerali amanzi kwasemini - kungaba i-gassata / i-frizzante (ekhazimulayo) noma i-liscia (amanzi amaminerali angenalutho) - bese uzama ukuthola iwayini le-rosé kusihlwa: lihamba kahle kakhulu nazo zonke izitsha zase-Italy, futhi ligcina elilodwa futhi inkampani yomuntu isha kanye nesishwankathelo. Ukunakekelwa nokuhlangenwe nakho okuqinile kuyelulekwa lapho kuvela isimo sezulu esibanda kakhulu, ukuze sithathe izinto eziningi ezintsha, ezimnandi njalo, indawo nokunambitheka, kanye nobucayi be wayini namanzi namanzi, nososo olunokhilimu kanye no-viniga.
Ngaphandle kokuthi ubheka uPapa njengomngane omuhle (futhi uyavuma), awekho amathuba okuhlala eDolobheni laseVatican ngokwalo. Kodwa-ke, kunamahhotela amaningi ezindaweni eziseduze naseRoma.
Thumela incwadi. Njengoba iVictoria City iyizwe elihlukile nayo inohlelo lwayo leposi; thumela iposikhadi kubangani bakho futhi izothunyelwa uphawu kusuka eVatican City.
IVietnam iyathandeka kulokho abafuna ukukugqoka, ngakho-ke uma uvakashela isonto lapho, qiniseka ukuthi izembatho zakho zimboza isikhumba esiningi ngangokunokwenzeka, ikakhulukazi imilenze yakho. Ukugqoka izingubo ezi-skimpy kanye nokulahlwa ngabantu abasondele kuwe kuzokhawulela ukuthi yiziphi izindawo ongangena kuzo.
Kuhlonishwa futhi kuhlonishwe iSonto lamaRoma Katolika kanye nemikhuba nemfundiso yalo. Labo abangewona ama Katolika futhi abakumemezela obala ngokuhlasela okusobala imibono nezinkolelo zeSonto bangaphathwa njengaphansi. Zama ukugcina izinkolelo zakho zikuwe futhi ugweme ukuphikisana ngazo.